ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း (မဿဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင်း (၃) | Calvary Burmese Church
သူတစ်ပါးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ ပုထုဇဉ် လူသားများအသက်ရှင်ရာ၌ ငြိမ်သက် ပျော်ရွှင်မှု ရရှိရန် အတွက် ၀လင်စွာ စားရရုံသာမဟုတ်ပဲ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု ပြေလည်မှ အသက်ရှင်ခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ၌ ၀လင်စွာစားသုံးနိုင်သော ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံမှာ ဆွီဒင် နိုင်ငံဖြစ်သလို လူသတ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံမှာလည်း ယင်းနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထမင်းဝလင်စွာ စားရရုံနှင့် လူ၏ နေ့စဉ် အသက်တာ၌ ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်ကြောင်း သိသာထင်ရှားပါသည်။ သာယာ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်လာရန် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အပြစ်များကို မမှတ်မထား၊ ကလဲ့စားချေမှု မပြုပဲ ရန်မဟုတ်၊ ခွင့်လွှတ်တတ်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤဆုတောင်းချက်တစ်ခုတည်း ကြည့်ပါက လုပ်အားခ ရယူတောင်းခံသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားမှ အပြစ်လွှတ်ရန် အတင်းတောင်းဆိုသကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နေသည်။ သူများ အပြစ်မလွှတ်မခြင်း ဘုရားသခင်မှ ငါတို့အပြစ်ဖြေလွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သူများ၏ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ကလည်း ငါတို့အပြစ် လွှတ်ရန် အတင်းအကြပ်တောင်းခံသကဲ့သို့ လည်း မဖြစ်စေသင့်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် လူဆက်ဆံရာ၌ ဤကဲ့သို့ “အခကြေးတောင်းခံခြင်း” သို့မဟုတ် “လုပ်အားခ” တောင်းခံခြင်းမျိုး မရှိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ရှည်ခြင်းသည် လူသားနှင့် နှိုင်းဆ၍ မရနိုင်ပါ (မဿဲ ၇း၁၁)။ ဘုရားသားများဖြစ်၍ ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်စွာ ကြိုးစားအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရန် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ Robert Louis Stevenson တို့၏ မိသားစုသည် မိသားစု ၀တ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဤဆုတောင်းပဌနာကို တောင်းလျှောက်ကြသည်။ “သူတစ်ပါးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို လွှတ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို လွှတ်တော်မူပါ” ဟူသော အပိုဒ်ကို ရွတ်ဆိုရန် ရောက်သောအခါ အပြင်ထွက်ပြီး၊ ဆုတောင်းအစည်းအဝေး မပြီးမချင်း ပြန်ဝင် မလာတော့ပါ။ အစာအိမ်ရောဂါ ရှိသူဖြစ်သောကြောင့် သူ၏ အမျိုးသမီးသည် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ “ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ၊ ရောဂါများထသလား” ဟုမေးသော် မဟုတ်ပါ၊ သို့ရာတွင် သူများ၏ အပြစ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်၍၊ ဤဆုတောင်းခြင်းကို မတောင်းချင်သောကြောင့် ရှောင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဖြေသည်။ မလိုက်လျှောက်နိုင်သဖြင့် ရှောင်ရန် မဟုတ်ပဲ၊ မတတ်နိုင်သောအရာကိုပင်လျှင် ဘုရားသခင်ထံမှ ခွန်အားယူပြီး ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကား ဘုရားသခင်သားသမီးများ၏ တကယ် ရပ်တည်ရမည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ အပြစ်အကြောင်းလေ့လာကြပါစို့
ကျွန်တော်တို့အပေါ်၌ သူများပြစ်မှားနိုင်သကဲ့သို့ သူများအပေါ်၌လည်း ကျွန်တော်တို့ ပြစ်မှားနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်အပေါ်၌လည်း လူသားများ ပြစ်မှားနိုင်သည်ဖြစ်၍ ဤ ပြစ်မှု ဟူသောအရာသည် မည်သို့သောအရာ ဖြစ်အံ့နည်း။ အပြစ်ကို အစုလိုက်ခွဲပါက (၅) ခု ခန့် ခွဲနိုင်ပါသည်။ (က)ဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ဖြစ်မလာခြင်း (Harmatia)
(ဃ) ပညတ်တော်များ နားမထောင်ခြင်း (Anomia) များသောအားဖြင့် ပြစ်မှားမိသည်မှာ မသိ၍ မဟုတ်ပဲ မလိုက်နာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးသာမက လူမျိုးတကာတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များရှိကြပါသည် (ရော ၂ )။ ချင်းအမျိုးသားများသည် ကယ်တင်ရှင်ယေရှု၏ နာမတော်ကို မကြားမသိမီကပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စကားပုံများ သီချင်းများအားဖြင့် ပညတ်တော်များ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အပိုင်း (၄) ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ (Click to read Part 4)
This entry was posted on May 11, 2011 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Prayer, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.	Shortlink